Faalo:Jagada Madaxweynenimada Somaliya ma beel gooniyay u suntan tahay? mise fashili kartaa arintaasi shirka Eldoret?
Tan iyo intii uu furmay shirka dib u heshiisiinta Somalida ee ka socda magaalada Eldoret ee Kenya ayaa waxaa ka soo baxayay saxaafada beelaha Muqdishu dega qoraalo iyo faalooyin la xiriira qaybsiga jagooyinka muhiimka ah haddii lagu heshiiyo in la dhiso Dawlad loo dhan yahay. La yaab ma leh in laga faaloodo ama la saadaaliyo muuqaalka sida ay u kaan doonto Dawlada la dhawrayo in ay ka soo baxdo heshiis ka dhaca Eldoret laakiin waxaa ah nasiib daro in wali beelaha Muqdishu qaaarkood ku haminayaan shir kasta oo la isugu yimaado in jagada Madaxweynenimadu tahay mid iyaga muqadas u ah oo aan loo gacan dhaafi Karin wax wada hadal ahna aan lagala yeelan karin oo iyaga jagadaasi meel u taal, damacaas oo ka dhashay salkana ku haya in beelahaas Muqdishu dhaxleen caasimadii wadanka Somaliya ka dib markii ay si aan naxariis lahayn uga sifeeyeen beelihii kale ka dib beelihii kalena beel walba u dalowday deegaankii ay asal ahaan ka soo jeedeen, markaasna beelaha Muqdishu is tusaaleeyeen maadaama Muqdishu tahay caasimadii wadanka, Dawlad kastana oo la dhisana ku qasban tahay inay xurun ka dhigato markaas beelaha degga Muqdisho ay iyagu xaq u leeyihiin jagada madaxweynenimada beelaha kale ee Soomaaliyeedna iyaga marti ugu ahaadaan Magaalada sida aan sidii filim boorsamiito ah uga aragnay dhawrkii sanno ee la soo dhaafay ruwaayadii Kooxda Carta ay ku soo alifeen tuulada Carta ee wadanka Jabuuti.
Siyaasiin badan oo Soomaali ah ayaa iyaguna aaminay aragtidaas oranaysa haddii beelaha Muqdishu helin jagadaas in aysan suuragal ahaanayn in la yagleelo ama la soo celiyo mar kale Dawlad Soomaaliyeed oo loo dhan yahay. Maba xuma in aragti ahaan in beelaha Muqdishu helaan jagada Madaxweynenimada balse ha heleene beelahaasiye maxay ku mutaysteen in ay jagadaas helaan? mise ka faaiidaysteen dhawrkii jeer ee iyaga loo gartay inay qabtaan jagadaas? mise ku soo celiyeen Muqdishu nidaamkii dawliga ahaa oo dhawr iyo tobankii sanno ee u dambeeyay noqotay meel bahalo galeen ah?.waa su'aalo mudan in la isweydiiyo.su'aasha hore waxaa la oran karaa beelaha Muqdishu waa laga mudan yahay jagadaas sababtuna waa deegaanka Muqdushu wali ma xasilana, beelahaasna waa ku guuldaraysteen inay soo celiyaan kala dambayntii iyo nidaamkii dawlaga, dhinaca kale Somaliland iyo Puntlandba waxaa ka jira maamulo shaqeeya yaysanba wali gaarin meeshii la rabaye.su'aasha ah beelaha Muqdishu ma ka faa'iidayteen kalsoonidii ay ka heleen beelaha kale? Illaa hadda 12-kii sanno ee tagay shirarkii horey loo qabtay waxaa lagu soo doortay shaqsiyaad ka soo jeeda beelaha Xamar, Sida Cali Mahdi oo dhawr jeer beelaha Somaaliyeed siiyeen kalsooni balaaran amase Cabdiqasim Salad oo lagu doortay Shirkii Carta xoolahii beelaha kale looga furtay Xamar. Mar walba wax guul ah lagama gaarin doorashooyinkaas. mana suuragalin in Muqdishu ku soo noqoto nidaam dawli ah iyo kala dambeyn, markasta oo shir la qabtana magaalada Muqdishu waaba ka sii dartaa oo nabadgalyada iyo amaankuba faraha ayay ka sii baxdaa. Iyadoo khasaarahaas lagala kulmay in beelaha Muqdishu lagu koobo jagada madaxweynaha ayaa haddana waxaa muuqata wali in qaacidadaas khasaaraha badan la sii daba joogo, shirkasta oo Soomaali loo qabtana ay noqotay heerbeeg aan sinaba loo dhaafi Karin haddii kale shirka lagu kala dareero siddii dhacday marar badan ayse ugu caansanayd wixii ka dhacay shirkii Qaahira oo beelaha Muqdisho damaaciyeen inay isku darsadaan labadii jago ee Madaxweynaha iyo tii wasiirka koowaad, sidaasna shirkii ku burburay.
Wax walba waa in wada hadal laga yeesho
Haddii jagada madaxweynenimadu u xiran tahay qolo gooniya maxaa la isugu dhibaa shirarkaan tirade badan? Qolada xiratay jagadaas maa loo aqoonsado? Sababta aysan suaalahaas suuragal u ahayn waxaa u daliila in jagadaas qolo walba gooni u raadinayso ayna tahay arimaha ugu weyn ee Somalidu isugu imaan ladahay, sidee bay caqli gal u tahay in qolo gooni u sheegato jago sidaas xasaasi u ah oo qolo walba damaacinayso. Waa sababta shir walba u burburo markii beelahu ogaadaan in beel gooniya isku sharaxday iskuna dooratay jagadaas. haddii aan laga wada hadlin arimaha la isku hayo lagana xaalin waxyaabaha la kala tirsanayo xal dhab ah ma imaanayo. Waxaa caado noqotay in shir walba oo la tago isla markiiba wada hadalka lagu furo sidii loo qaybsan lahaa jagada madaxweynaha iyo raiisal wasaaraha iyadoo haba yaraatee aan waxba laga oran arimaha murugsan ee Somalida kala irdheeyay, kuwaas oo ay ugu weyn yihiin;
Hantida iyo dhulka la kala haysto
dadka sida aan kala sooca lahayn loogu xasuuqay magaalooyinka waaweyn.
magaalada noqonaysa caasumada ku meel gaarka ah inta heshiis taama la gaarayo.
Arimahaas oo aan meel la isla dhigin laguma heshiin karo jago intaas oo beelood hunguryeynayso, tanaasul ma imaanayo iyadoo aan laga heshiin dhaawaca dagaalka sokeeye geystay. iyadoo laga heshiin lagana tanaasulin qiyaamaynta siyaasadeed ee jilaafada qoloba qolada kale la daba joogto meeshii laga shaqayn lahaa isku soo dhawaansho, wada shaqaysi iyo isfaham Somalinimo iyo Muslimnimo ku jirto.
Shirka ELdoret ha ka tusaale qaato waxii fashilay shirarkii hore
Inkastoo Dawladaha ku bahoobay urur goboleedka IGAD ay ku soo dareen ajendaha shirka qodobka ah in shirku gudi ka baaraan dega u saaro sababihii kalifay in fashil ku yimaado shirarkii kuwan ka horeeyay oo kor u dhaafay 13, haddana waxaa cad in shirku durba aad moodo in uu cagta saaray wado qaloocan oo u eg meeshay mareen shirarkii hore, taas oo ay ugu weyn tahay ka haddalka qeybsiga jagooyinka iyadoo wax heshiis iyo wada haddalba dhex marin ergada shirka, waxaa durba bilaamay marin habaabinta shirka oo ergooyin aan lagu casumin shirka lagu soo daad gureeyay si qalqal u galiyaan shirka sidii shirkii Carta. waxaa bilaabay in rag isku muujiyaan inay u oleoleeyaan in iyaga la doorto, taas oo keenaysay inaan ergadu ka wada xaajoon arimaha xasaasiga ah ee burburka keenay. In ergooyinka qaar shirka hal lug kula jiraan oo ishaafalataynayaan sida arini noqoto. In Kooxaha qaar wali sheegaynayaan kuna dhagan yihiin inay iyagu Dawlad yihiin ee shirku taas aqoonsado. arimahaas horey baan u soo aragnay Somaliyana qiyaano waa ka soo dharagtay ee hal shir oo daacad ah ayay u baahan tahay.
Gunaanad:maxaa ka soo bixi kara Eldoret?
Shirkaan waxuu u muuqdaa 50% inuu guulaysan doono, lamana saadaalin karo, waxa kaliya oo uu uga duwan yahay shirarkii hore waa tirada hogaamiyaasha kooxaha ka soo qayb galay oo aan cidina maqnayn iyo taageerada Dawladaha Caalamka iyo habka loo qabanqaabiyay shirka. Ugu dambeyntii Somaliya maanta ma joogto waqti ay isku qabsato kursi iyo waqti waqtiga yar la isaga qaado qiyaamooyin siyaasadeed oo laga soo daalay oo 13 sanno la soo maleegayay, waxna lagu soo waayay, beelaha Somaliyeed intaysan kuligood dabar goin haka heshiiyeen masiibada ku habsatay, jagada madaxweynuhana yeysan noqon sababta dhalisa fashilka shirka, qolo walba dib ha isugu noqoto oo haddii aysan Somalida kale ka naxayn iyagu ha iska naxeen illeyn ugu dambeyn dhibaatadu waa saamayn iyaga iyo ubadkooda. Somaliya waa hal qoys yaan qoyskaasi u dabar go'in ku loolanka hal kursi.